Vaovao - lamba tsy tenona tsy manenona
Raha ny fahitan'ny besinimaro, tenona vita amin'ny lamba nentim-paharazana. Misafotofoto ny anaran'ny lamba tsy tenona, tena mila tenona ve?
Ny lamba tsy tenona dia antsoina koa hoe lamba tsy tenona, izay lamba tsy mila tenona na voatenona. Tsy fomba nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny famolavolana sy ny fametahana kofehy tsirairay, fa ny lamba namboarin'ireo kofehy mifamatotra mivantana tamin'ny alàlan'ny fomba ara-batana. Mikasika ny fizotry ny famokarana, ny lamba tsy misy tenona dia mampiasa chip polymer mivantana, kofehy fohy na filamente hamoronana fibre amin'ny alàlan'ny airflow na ny lambam-by, ary avy eo manamafy amin'ny alàlan'ny spunlacing, fanjaitra fantsom-baravarana na fikomiana mafana, ary farany mamorona lamba tsy tenona aorian'ny famaranana Ny lamba.
Ny fizotry ny famokarana lamba tsy tenona dia azo zaraina amin'ireto dingana manaraka ireto:
1. Manambatra ny fibre; 2. Fibre ho lasa harato; 3. Fanamafisana ny harato fibre; 4. Manaova fitsaboana hafanana; 5. Farany, famaranana sy fanodinana.
Raha ny antony mahatonga ny lamba tsy tenona dia azo sokajiana ho:
Lamba tsy misy tenona amin'ny spunlace: ny fiaramanidina rano maneritery be dia be dia be mipetaka amin'ny ravin-tady fibre iray na maromaro hampikambana ny kofehy, ka hanamafisana ireo tranon-kofehy.
Lamba tsy misy tenona mifamatotra hafanana: manampy fitaovana fanamafisana ny fatorana mifangaro vovoka na vovoka amin'ny tranokalan'ny fibre, ka hafanana sy miempo ny tranokalan'ny volo ary avy eo mangatsiaka hanamafisana azy io ho lamba.
Lamba vita amin'ny rivotra tsy vita vita amin'ny pulp: fantatra ihany koa amin'ny taratasy tsy misy vovoka, lamba vita amin'ny taratasy maina tsy tenona. Mampiasa teknolojia napetraka amin'ny rivotra izy io hanovana ny kofehy vita amin'ny hazo ho lasa kofehy tokana, ary ny fibre napetraka amin'ny rivotra dia entina hanangonana ny fibra eo amin'ny lambam-baravarana ary hamafisina ho lamba.
Lamba tsy misy tenona mando mando: ny akora vita amin'ny fibre apetraka ao anaty salantsalin'ny rano dia sokafana amin'ny kofehy tokana, ary ny akora vita amin'ny fibre isan-karazany dia mifangaro mba hamoronana slurry fampiatoana fibre, izay ampitaina amin'ny rafitra mpamorona tranonkala, ary ny tranonkala dia natambatra ho lamba ao anaty fanjakana lena.
Lamba tsy vita tenona Spunbond: Aorian'ny fivoahan'ny polymer ary ahinjitra mba hananganana filamenta mitohy, dia hapetraka ao anaty harato izany, ary ny harato fibre dia fehezina na hamafisina amin'ny mekanika ho lasa lamba tsy tenona.
Lamba tsy voatenona voarendrika: ny dingana famokarana dia fampidirana polymer-melt extrusion-fibre formation-fibre cool-net formation-fanamafisana ho lamba.
Lamba tsy voatenona fanjaitra tototry ny fanjaitra: karazan-damba tsy voaisy ravin-maina izy io, izay mampiasa ny fantsona fantsona fanjaitra mba hanamafisana ny tranokala malefaka ho lamba.
Lamba tsy tenona voaisy kofehy: karazana lamba tsy tenona namboarina maina izy io, izay mampiasa firafitra tadivavarana vita amin'ny kodiarana ho fanamafisana ny tranokalan'ny fibre, sosona kofehy, fitaovana tsy tenona (toy ny ravina plastika sns.) Na ny fitambaran'izy ireo manao lamba tsy tenona.
Ny akora vita amin'ny fibre takiana amin'ny fanaovana lamba tsy tenona dia tena malalaka, toy ny landihazo, hemp, volon'ondry, asbestos, fibre vera, fibre viscose (rayon) ary fibre synthetic (ao anatin'izany ny nylon, polyester, acrylic, polyvinyl chloride, vinylon) Andraso ). Fa amin'izao fotoana izao, ny lamba tsy tenona dia tsy vita amin'ny kofehy landihazo intsony, ary ny kofehy hafa toy ny rayon dia nisolo toerana.
Ny lamba tsy tenona koa dia karazan-pitaovana vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana, izay manana ny toetra mampiavaka ny hamandoana, miaina, mahazaka, maivana, tsy mora may, mora simba, tsy misy poizina ary tsy mahasosotra, be loko, vidiny ambany, azo averina, sns, ka ny sehatr'asa dia be dia be.
Anisan'ireo fitaovana indostrialy, ny lamba tsy tenona dia manana ny mampiavaka ny fahombiazan'ny filtration avo, insulation, insulation heat, asidra fanoherana, fanoherana alkali ary fanoherana ny ranomaso. Ampiasaina matetika izy ireo mba hanaovana haino aman-jery sivana, insulateur amin'ny feo, insulation elektrika, fonosana, tafo sy fitaovana manimba sns. Amin'ny indostrian'ny filàna ilaina isan'andro dia azo ampiasaina ho fitaovam-pandrefesana akanjo, ambain-damba, fitaovana fandravahana amin'ny rindrina, lambam-panakona, kitapo fitsangantsanganana sns. Amin'ny vokatra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana dia azo ampiasaina amin'ny famokarana akanjo fandidiana, akanjo lava marary, sarontava, fehikibo fanadiovana sns.